जव चोट पुर्रायो ‘भारतीय हो ?’ भन्ने शब्दले
धेरै भाग्यमानी हुन्छन् मनका पीडालाई शब्दमा कोर्न सक्नेहरू । मैले पनि केही दफा प्रयास नगरेको होइन, कहिले फेसबुक कहिले ट्वीटर तर अनपेक्षित वादविवादले हरेक पटक मेरा केही राम्रा साथीहरूको मप्रतिको दृष्टिकोणमा बदलाव आउन जान्थ्यो । मेरो पीडाको विषय नै त्यो हो, जसमाथि चर्चा हुँदा कैयौँको मगज तात्तिन्छ । मेरो कथाको सुरुवात काठमाडौँको मन..
के हो ‘पोलिटिकोफोबिया’ ?
अंग्रेजी शब्द ‘पोलिटिकोफोबिया’ को अर्थ राजनीति वा नेतादेखि डराउनु भन्ने हुन्छ । ग्रीक भाषा..
लोकतन्त्र भयो जोगीलाई हात्ती उपहार !
वन तथा भूसंरक्षण मन्त्री शङ्कर भण्डारीले लोकमानसिंह कार्कीलाई काँध हालेका छन् । अख्तियार द..
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई खुलापत्र
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू नमस्कार, म एक सर्वसाधारण नागरिक हुँ । थाहा छैन तपाईंला..
विश्व बजारमा नेपाली चियाको स्थान
करिब १ सय ४८ वर्ष पहिला कर्णेल गजराजसिंह थापाले चीनबाट उपहार स्वरुप प्राप्त चियाको बीउ इला..
लोकमान प्रकरण : व्यक्ति वा विधि प्रधान भन्ने सवाल
लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा नियुक्त गर्ने यही राजनीतिक प्रणाली र यिनै नेताहरू हुन्, जसलाई अहिले कार्कीलाई फाल्ने हतारो भएको छ । तत्कालीन बाबुराम भट्टराईको सरकारले उनलाई नियुक्त गर्दा उनको नियुक्तिको लागि होस्टेमा हैँसे गर्ने नेताहरूलाई उनको वैधानिक योग्यतामा प्रश्न उठाउने कति नैतिक अधिकार छ, ..
भत्किएको मेरो देश
म यो देशमा जन्मेको नेपाली नागरिक हुँ । मसँग नेपाली नागरिकता छ । मेरो देशको आफ्नै भाषा, संस्कृति र मौलिकता छ । म यो देशको प्रतिनिधि नागरिक बनेर केही मेरो देशको तथ्य कुरा गर्न चाहान्छु । मेरो देश यस्तो छ जहाँ पान पसलमा कन्डम पाइन्छ । फास्टफुड र ब्युटी पार्लरमा यौन व्यवसायी पनि भेटिन्छ । […]
पहिला देशभित्रका भारतभक्त धमिराहरु चिनौँ
विद्युत् प्रधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नियुक्त हुनेबित्तिकै त्यहीँभित्रका वरिष्ठ भनाउँदाहरुले खुबै हल्ला मच्चाएका थिए । वरिष्ठतालाई मिचेर कनिष्ठलाई कार्यकारी प्रमुख बनाइयो भनेर विरोध गर्ने, असहयोग गर्ने, आफूभन्दा जुनियरलाई हाकिम मान्न तयार छैनौँ भन्दै लबिङ गर्ने आदि गरिहिँडेको पनि सुनियो । प्रभाकरको प्रभावले हो कि क..
नेपालको पर्यटन नीति संशोधन आवश्यक
प्राकृतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक तथा जैविक विविधताको दृष्टिकोणले नेपालमा पर्यटन व्यवसायको प्रचुर सम्भावना रहेकोमा दुईमत छैन । नेपाल पर्यटन बोर्डले दिएको जानकारी अनुसार नेपालमा वार्षिक करिब आठ लाखको हाराहारीमा विभिन्न देशबाट पर्यटक आउने र करिब दुई लाख नेपालीले पर्यटन क्षेत्रमार्फत प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । पर्यटक न..
लोकमान प्रकरण : अख्तियार कमजोर बनाउने रणनीति
राजनीतिकर्मी, बुद्धिजीवी, विद्यार्थी सबैको मुखमा अचेल एउटै शब्द झुण्डिएको छ ‘लोकमान’ । लोकमानको विषयले मिडिया मात्र हैन देश नै हल्लिएको छ । राजनीतिक माहोल तातेको छ । केही नेताहरुको होस उडेको छ भने केही व्यक्तिहरु खुशी देखिन्छन् । यो विषयमा देश नहल्लियोस् पनि कसरी, हिजो तिनै दलहरु काङ्ग्र्रेस, एमाले र माओवादीले लोकमान अख्तियार प्..
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, कुशल छौँ, कुशलताको कामना गर्दछौँ । हाम्रो नेपालमा जनता कुशल हुन आवश्यक नै हुँदैन । नेताहरु कुशल भए पुग्छ । नत्र फेरि देशको ढुकुटी रित्तिन्छ । १० वर्षको जनयुद्धपछि जङ्गलबाट गाउँमा वा जनतासित घुलमिल हुन सक्नुभएको हजुरलाई भेट्न धेरै ठूलो प्रयास भयो । विडम्बना नसकेर आजै चिठीमार्फत भेट्ने आशा प्रकट गर्दैछ..
तरकारीवाली देख्ने, खाडीमा सडेका लास नदेख्ने ?
केही दिनदेखि देश विदेश र सामाजिक सञ्जालमा एउटा गजबको व्यङ्ग्य अथवा चर्चा भाइरल बनेको छ ‘तरकारीवाली’ हि हि … सुन्दा हास्यास्पद लाग्यो । किनकि म मुग्लानमा रगत पसिनासँग दैनिक तातो गर्मीमा श्रम बेचेर केही हदसम्म रेमिट्यान्सले देश धानेको छु । हो त्यही तातो रगत भएरै होला मनको कुरा लेख्ने जमर्को गरेँ । म पनि एउटा […]
आदिवासीहरूको अस्तित्व सङ्कटमा
खासगरी यतिबेला स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाको विषयले चर्चा पाएको छ । राजनीतिप्रति चासो राख्नेहरूको मुखबाट गाउँपालिका र नगरपालिकाकै कुरा सुन्न पाइन्छ । स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले पछिल्लो समय झापामा बढीमा १६ वटा कलष्टर हुनेगरी गाउ“पालिका र नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण हुनुपर्न..
छठको ८ विशेषता
महोत्तरी–पर्वहरु मनाउने क्रममा दशैं, दिपावली र तिहार पर्वपछि अहिले छठ पर्व मनाइँदै छ । आस्था र सहअस्तित्वको पर्व छठको आज तेस्रो दिन, जसलाई लोकबोलीमा ‘सझियाँ घाट’ भन्ने गरिन्छ । मानव र प्रकृतिबीचको सम्बन्धलाई छठले प्रत्येक वर्ष प्रगाढ बनाउँदै आइरहेको छ । मानव जातिको पीडाप्रति सजग गरी छठ पर्वले हरेक वर्ष दीपावली समाप्तिपछि मानव र ..
बालबालिकालाई दुव्र्यसनबाट बचाउन के गर्ने ?
बच्चा जन्माउनु, हुर्क्काउनु, शिक्षादिक्षा दिलाउनु मात्र आफ्नो अभिभारा होइन । कतै तपाईंको अधिक लाड प्यारले वा तपाईंको हेल्चेक्र्यााइँले आफ्नो बच्चा मात्र होइन समाजको अरु बच्चा बिगार्ने बाबु आमा त तपाईं बन्नु भएको छैन ? विचार गर्नुस्, यदि त्यसो हो भने बिग्रिएका बाल बच्चाको दोष तपाईंलाई लाग्न सक्छ । तपाईंले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अपर..
निष्ठासँगै स्वास्थ्यसँग जोडिएको पर्व हो छठ
छठ पर्व भारतको बिहार, युपीका साथै नेपालको मिथिला क्षेत्र र हालमा आएर नेपालका अधिकांश भेगमा मनाइने सर्वस्वीकार्य महान् पर्व हो । छठप्रतिको आस्था र विश्वास बढेर नै आज मिथिला लगायत नेपालका अधिकांश भेगमा यो पर्व मनाइने गरिएको छ । विभिन्न लेखकको छठ बारे आ–आफ्नै विश्लेषण र व्याख्या छन् । साथै छठ पर्व मनाइनुका विभिन्न किंवदन्ती [&helli..
भारतीय राष्ट्रपतिको रहस्यमय भ्रमण !
भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको तीन दिने नेपाल भ्रमण सम्पन्न भएको छ । नेपालका सत्तासिन नेताहरुले भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमण सम्पन्न भएकामा सन्तोषको सांस फेरेका होलान । भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमणप्रति नेपाली जनतामा त न कुनै हर्ष थियो न उमङ्ग नै । भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमणमा नेपाल सरकारले सुरक्षा व्यवस्थाको नाममा लगाएको अघोषित कर्..
भैरहवामा एनआरएनसँग नियमका कुरा र पत्रकारसँग भनसुनका कुरा
राजधानीमा विगत छ वर्षदेखि एउटा ट्रष्ट उन्मुख कलेजमा अध्यापन र आफ्नै निजी व्यवसाय भएकाले यसपालि पनि अष्टमीदेखि पूर्णीमासम्म भैरहवा बसाइँ रह्यो । पूर्णीमा लगतै स–परिवार काठमाडौँ फर्किन पर्यो तर काठमाडौँ फर्किएको ठीक चार दिनपछि नेकपा एमाले रूपन्देहीको आठौँ जिल्ला अधिवेशनको छेको पारेर पुनः भैरहवा फिर्ने अवसर जुर्यो । तीन दिन (कात्ति..
बिजौरी हत्या काण्डका २२ वर्ष, यसरी भएको थियो घटना
२०५१ साल कार्तिक १७ गते करिब पौने पाँच बजेतिर देश पूरै चुनावमय थियो । कार्तिक २९ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन प्रचारप्रसारमा दलहरू कम्मर कसेर लागेका थिए । त्यो माहोल दाङमा पनि थियो । साम, दाम, दण्ड, भेठ लगाएर भए पनि चुनावी परिणामा आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि काँग्रेस र त्यसका केही उम्मेदवार लागेका थिए । सरकार […]
अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा पेस भएको छ । यो विषयले अहिले जताततै चर्चा पाएको छ । देशको राजनीति यही विषयमा केन्द्रित भएको छ । देशको कुना काप्चामा बस्ने जनताका बीचमा यो विषय मुख्य चर्चाका रुपमा रहेको छ । अख्तियार प्रमुखका रुपमा लोकमान नियुक्ति हुँदा नै उनी विवादै विवादमा थिए । यस्तो […]
लोकमानको नियुक्ति नै लोक अपमान !
यतिबेला हिन्दु नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो पर्व मानिने तिहारको रमझमले नछुने सायदै को होला ? तर सर्वत्र सञ्चार माध्यमका प्रमुख समाचार शीर्षक भने तिहार विशेष नभएर निलम्बित (महाअभियोग प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भएको हुँदा) अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीसँग सम्बन्ध राख्ने घटनामा आधारित भएर प्..
श्रीमती जागिरे होस्, घरको काम मै गर्छु
मङ्सिर अर्थात् लगनको महिना आउँदैछ । धेरै नवजोडी यो लगनमा सँगै जिउने मर्ने कसम खाँदै आफूहरू एक भएको उद्घोष गर्ने छन् । मेरो जीवनसाथी यस्तो होस्, उस्तो होस् बिहे नहुन्जेलसम्म धेरैको मनमा प्रश्न, कौतुहलता र जिज्ञासा खेल्ने गर्छ । आफ्नो हुनेवाला जीवनसाथी कस्तो होस् भन्ने चाहना राख्छन् त आम युवती ? पक्कै हेर्दा लायकको, पढे–लेखेको, [..
: दिदी ! म यसकारण बेख़बर भएँ…. प्यारी दिदी ‘प्रिया’ सप्तरंगी माया सहित अन्तरंगी ढोग । संचै छौ, छैनौ भनेर सोध्ने पनि अधिकार छ जस्तो लाग्दैन यतिका बर्ष सम्म बेखबर भएको मान्छेले ! तर दिदी ! तिमी मान या नमान दिन रात तिम्रै याद साँचेर निरस जिन्दगी बाँचेको छु । तिमीले अनलाईनमा लेखेको खुला पत्र […]
मलाइ यसकारण विद्या भण्डारी मन पर्दैन
नेपाली राजनीतिका सबै भन्दा लोकप्रिय र प्रतिभावान व्यक्ति मदन भण्डारीलाई २०५१ जेष्ठ ३ गते दासढुंगामा रहस्यमए ढंगले हत्त्या गराइयो । जसले गर्दा विद्या भण्डारीका सम्पूर्ण खुसीहरु खोसिए, उनको सिन्दुर पुछियो । श्रीमान् गुमाउनुको पिडा साएद शब्दमा बयान गर्न सम्भव छैन होला । त्यो भन्दा पनि ठूलो घाटा त नेपाल र नेपाली जनतालाइ भयो । मुलुक ..
महाअभियोगमा किन मौन बस्दैछ काङ्ग्रेस ?
सबै राष्ट्रिय मिडिया, पत्रपत्रिका, सामाजिक सञ्जालमा लोकमान सिंह कार्कीको महाअभियोगको विषयले छाएको छ । लोकमान सिंह कार्कीको कार्यकालभरी लुकेर बसेका आवाजहरु अहिले एकपछि अर्काे गर्दैै बुलन्द भइरहेका छन् । प्रतिशोध प्रवृत्तिका पात्र, पदीय दुरुपयोगको विम्ब, त कुनै रातो घरभित्र कालो धन्दा यस्तैयस्तै लेख रचनाहरुले भरिएका छन् राष्ट्रिय ..
हो त ! केटी जिस्काउन मज्जा आउँछ
‘ओ ! स्विटि कता हो ?’ ‘डेटिङ जान ला !, देखिनस ?’ ‘मलाई नलगि एक्लै ! एक्लै !’ ‘आईज न पछि लागेर, तेरो बाउले तह लाएर पठाँउदा था पाँउछस !’ खरो परिछे झनक्कै रिसाईहालि । बानी नै यस्तै छ । केटी देख्यो कि जिस्काईहाल्ने । साईडमा केटी देख्यो कि जोसले होस गुमाईदिन्छ । अनि पो […]
महाअभियोग लगाउन उचित र प्रयाप्त प्रमाण पुग्दैन । महाअभियोग सिफारिस समितिलाई यो तथ्य थाहा छ । तर्क बितर्क चल्दै जाँदा आरोपहरू फिकका हुँदै जान्छन्, महाअभियोग विवादित हुँदै जान्छ र नेताहरूको नियत प्रस्ट हुँदै जान्छ । जनताबाट महाअभियोगभन्दा नेताहरूको नियतिमाथि प्रहार सुरु हुनथाल्छ । नेपाली काँग्रेसलाई विश्वासमा नलिई समितिमा जानुको क..
काठमाडौँका साँघुरा बाटा त्यसमाथि अनियन्त्रित सङ्ख्याका सवारी साधन, आफ्नै सुरमा हिँड्ने बेखबर पदयात्री, सडक दायाँ र बायाँ साइकल र मोटरसाइकल पार्किङ, अनि असरल्ल सामान बिस्कुनझैँ सुकाएर व्यापार गर्ने फुट्पाथ पसलेहरू र तिनका पसल । यो दृश्य असन इन्द्रचोकको मात्र नभई सम्भव भएसम्म सबैतिर यस्तै हो र बढ्दो बजारीकरण तिर उन्मुख प्रत्यक टोल..